Prizidaantiin Ameerikaa Jijjiiramuun Imaammata Isheen Itiyoophiyaaf Qabdu Hin Jijjiiru:Mormitoota – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
Faayilii – Hoggantoota gamtaa Medrekii
WASHINGTON, DC — Paartii biyya bulchu IHADEG fi mootummaa dhiittaa mirga namaa fi waltajjii siyaasaa dhiphisuun kan himatan gareeleen mormitootaa michoota kan akka US irraa waa hedduu eegu. US paartii biyya bulchu waliin michummaa walitti dhiyeenya qabutti fayyadamuun dhiibbaa gochuu dandeessi jechuun amanu mormitoonni kun.
Gumaacha US kan isaan ittiin madaalan malli tokkos dhiibbaa isheen mootummaa irra keessuun akka ta’e illee ibsaniiru. Profeeser Beyyenee peexroos miseensa paarlaamaa kan turan miseensota mormitootaa keessaa kan yeroo dheeraaf tajaajilan isa dura yoo ta’an yeroo ammaa gamtaa Medrekiif dura taa’aa dha.
Itiyoopiyaan michummaa farra shororkeessummaa US waliin qabdu kan torban lama booda aangoo Obaamaa harkaa fuudhan bara bulchiinsa Trump cimee itti fufa jedheen yaada jedhan profeesor Beyyeneen.